Raila Odinga iyo Cabdi Wali Cali oo kulmay - BBC Somali
Raila Odinga iyo Cabdi Wali Cali oo kulmay
31 Oktoobar 2011
Image caption War saxaafadeed ay soo wadasaareen labada Raiisalwasaare ee Soomaaliya iyo Kenya
Wadahadal saacado badan qaatey kadib ayaa Raisul Wasaaraha DKMG ee Somalia Abdiweli Mohamed Ali iyo Raisul Wasaaraha Kenya, Raila Odinga waxay soo saareen war saxaafadeed ku aadan hawlgalada milateri ee ka socda gobollada Jubbooyinka ee koonfuurta Somalia, tan iyo markii ay halkaa galeen ciidamada Kenya bartimihii bishan October.
Richard Onyonka, Wasiir ku xigeenka arrimaha dibedda ee Kenya oo saxaafadda u akhriyey qodobada war murtiyeed ay kabada dal soo saareen ayaa waxaa uu xusey in labada dhinac ay isku afgarteen sii wadida hawlgadala wadajirka ah ee looga soo horjeedo kooxda Al-Shabbaa, iyadoo beesha calamkana laga codsadety gacan inay ka geysato sidii loo cunaqabateyn lahaa dekedda Kismaayo oo ay ku tilmaameen isha ugu muhiimsan ee saadka iyo dakhliga kooxda Al-Shabab.
Raisul Wasaare Abdiweli Mohamed Ali ayaa booqashadan uu ku joogo Kenya waxa ay ka dambeysey martiqaad uu ka heley Kenya, kadib markii ay soo baxeen warar is khilaafaya oo ku aadan hawlgalada Kenya ee koonfuurta Somalia, iyo xukuumadda Nairobi oo sharaxaad dheeri ah ka dalbaneysey Muqdisho.
Shir jaraaiid oo wadajir ay madaxda labada dal qabteen wadahadalkooda kadib ayaa Raisul wasaaraha Somalia waxaa uu ku sharaxey qodobada ugu muhiimsanaa wadahadalada uu la yeshey dhiggiisa Mr Odinga.
Raisl Wasaare Odinga ayaa isna halkaasi ka jeediyey hadal kooban.
Raisul wasaare Odinga oo shirkaasi ay ku wehliyeen madax ka tirsan golaha wasiirada Kenya, ayaa mar kale meesha ka saarey warar la isla dhex marayo oo sheegaya in Kenya ay dooneyso inay maamul u sameyso gobolada Jubbooyinka, waxaana uu sheegey inay taasi been tahay, isla markaana goobaha ay qabsadaan ee koonfuurta Somalia ku wareejin doonaan ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee loo yaqaabn AMISOM.
Dhanka kale wakiila gaarka ah ee Xoghahay guud ee qaramada midoobey ugu qaabilsan arrimaha Somalia, Augustine Mahiga ayaa shir jaraaiid oo uu ku qabety Nairobi, waxaa uu sheegey in magaalada Muqdisho boqolkiiba 98 ay gacanta ku hayaan ciidamada DKMG iyo kuwa AMISOM.
Waxaase uu sheegey in loo baahan yahay in dadaal dheeri ah la geliyo ciribtirka kooxda Al-Shabab oo uu sheegey inay weli khatar ku yihiin amniga shacabka iyo weliba caqabad ku hor gudban gargaar aadminimo oo loo fidinayo dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen.
Mr Mahiga waxaa uu sheegey in loo baahan yahay kordhinta ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee ka hawlagalaya Somalia si buu yiri ay u dhameystiraan hawsha nabad ilaalinta ee ay u tageen Somalia.
Waxaa uu xusey in Djibouti la filayo inay degdeg ciidamo ugu biiriso hawalgalada AMISOM, iyo weliba Siera Leone oo la filayo in aaakhirka sannadka amaba bilowga sannadka cusub ay gaaraan Muqdisho.